Sida loo Beddelaan VRO in DVD Effortlessly
> Resource > DVD > Sida loo Beddelaan VRO in DVD
Waxay leeyihiin qaar ka mid ah files VRO oo doonaya in ay gubi in DVD si joogto ah in lagu ciyaari karaan ciyaartoyda DVD caadiga ah? Maqaalkani waxa uu ku tusi doona sida ay u badalaan VRO in DVD iyada oo la isticmaalo dareen VRO in DVD Converter - Wondershare DVD abuura . Sidaa daraadeed, aad astaysto ah menu DVD shakhsi u DVD aad si fudud oo aad xaalkaa videos si deg deg ah, si aad u abuuri karaan masterpiece weyn ka VRO qoro files.
Download, rakibi oo ay maamulaan this smart app. Markaas, raac tilmaan-hoose talaabo talaabo ah.
1 dejinta aad VRO videos
Si aad ku shuban files VRO si weyn VRO in DVD gubi, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah saddex dariiqo:
Hit badhanka buluug ah ku wareegsanaa, iyo ka dibna tag "Add Files ..." ikhtiyaarka in submenu pop-up ah.
Haddii kale, in this app ee Murayaad bidix, guji "+ Import" badhanka xitaa aad PC iyo dajiyaan faylasha VRO aad rabto in aad ku gubi.
Tag gal ah in aad ku jira faylasha VRO deegaanka, ka dibna jiidi & hoos u faylasha aad rabto in aad tani app ee Murayaad bidix.
1. Si aad u riix batoonka "Add horyaalka" hoose ee suuqa kala tan, waxaad ku dari kartaa horyaal oo dheeraad ah si ay u maareeyaan videos.
2. Haddii aad rabto in aad beddesho xigxiga video ah, kaliya aad riix mid ka mid ah bar video aad rabto in aad ka, ka dibna riix "↑" ama "↓" doorasho hoose ee interface ugu weyn this app ee.
3. Haddii aad ku dhufo option Edit on kasta bar video shayga, aad furi doonaa ay suuqa kala video tafatirka. Markaas, aad awoodaan si ay ula qabsadaan video dhalaalka, saturation, bedelkeeda, mugga, fucous meesha qaar ka mid ah shaashadda fiidiyow ah, ama meesha laga saaro qayb iyagaa midkood ah ee video ku aadan rabin.
2 Samee DVD menu ah oo ku eegaan mashruuca oo dhan
Slider dhaqaaji in ay doortaan mid aad jeceshahay oo dhan arrimo DVD menu ee "Menu" window. Haddii aad rabto in aad ka dooran karto more arrimo DVD menu oo lacag la'aan ah , waxaad riixi kartaa batoonka cagaaran hoos arrow in la furo maktabadda khayraadkeenna online. Next, marka aad soo xulay mid ka mid template, aad astaysto DVD kuu gaar ah menu by badhamada ku daray, thumbnails, qoraal, aad background image jecel / music iwm
Si loo hubiyo saamayn wax soo saarka, hadda, waxaad u baahan tahay inaad ku eegaan mashruuca oo dhan ee "Kulanka Xiisaha Leh" window. Haddii saamaynta waa qanacsanayn, kaliya dib u samayn mashruuca oo dhan.
3 Guba VRO in DVD
Geli disc maran DVD galay disc drive computer ee (DVD5 iyo DVD9 Labada taageeray). In ka "Guba" window, waxaad u baahan tahay sax ah "Guba si disc" doorasho iyo dhufatey "Guba" button. Kolkiiba, barnaamijkan ayaa bilaabi doonta qoridda VRO videos in disc DVD ah. The DVD disc Writen si toos ah la saaray doonaa mar habka gubashada waxaa lagu sameeyaa.
Fiiro gaar ah: Haddii size ee mashruuca oo dhan waa in ka badan awoodda DVD kaydinta, VRO si DVD Converter u cadaadin doonaan inay ku haboon ee DVD aad disck si toos ah.
Sida loo Beddelaan VRO in AVI
Sida loo Beddelaan WTV in DVD
Wedding DVD Muqaal - kaamilo Wedding DVD Muqaal in qasabno
Sida loo Beddelaan MXF in DVD
Sida loo Beddelaan uTorrent Movies in DVD Qaabka (Windows 10 ka mid ah)